Waxaa jira xuquuqo gaar ah oo loogu talogalay carruurta halkan Jarmalka. Maxaa laga wadaa midaasi? – Tips for refugees
Waxaa jira xuquuqo gaar ah oo loogu talogalay carruurta halkan Jarmalka. Maxaa laga wadaa midaasi?
Xuquuqaha banii’aadamka UN-ka waxay khuseeyaan ku dhowaadkii meel kasta oo adduunka ah.
Waxay dhigaan: in dhammaan dadka oo dhan ay si siman qiimo u leeyihiin oona yihiin kuwo muhiim ah.
Sidaas darteeda, dowladu waa in ay ula dhaqantaa dadka oo dhan si isku mid ah.
Xuquuqaha banii’aadamka sidoo kale waxay khuseeyaan carruurta.
Si kastaba, carruurtu waxay u baahanyihiin xitaa xuquuqo dheeraad ah.
Si midaan loo gaaro waxaa jira Heshiiska ku saabsan Xuquuqaha Ilmaha.
Dhammaan carruurta waa in loola dhaqmo si isku mid ah.
Dhammaan carruurta waa in la ilaaliyo.
Dhammaan carruurta waa in la dhiirageliyo.
Fikradaadu waa muhiim waana in la maqlo.
Kuwaan waa xuquuqaha carruurta.
Xuquuqaha carruurta waxaa lagu dabakhaa adduunka oo dhan ku dhowaadkii waddan kasta.
Waxay khuseeyaan dhammaan carruurta oo dhan laga bilaabo marka ay dhashaan illaa ay ka gaaraan 18 sanno jir.
Dadka waaweyn waxay masuul ka yihiin in ay xuquuqahaan siiyaan carruurta.
Xuquuqaha carruurtu waa kuwo aad muhiim ugu ah gudaha dalka Jarmalka.
Gabdhuhu waxay leeyihiin isla xuquuqaha ay wiilashu leeyihiin.
Dhammaan dadka ku nool gudaha dalka Jarmalka waa in ay ihtimaan siiyaan xuquuqaha carruurta.
Maxay yihiin xuquuqaha aad leedahay maadaama aad tahay ilmo ama qof yar?
Su’aashaan jawaabteeda waxaan ku sharxi doonaa maqaal kale.
Previous Previous post: Anigu waxaan jiraa 16 waxaana u sheegay saaxiibadayda in aan khaniis ahay. Hadda inbaddan oo wiilasha kamid ahi ma doonayaan in ay saaxiibo ila noqdaan. Qaarkoodna waaba kuwo aad xaasidiin u ah. Maxaan sameeyaa?
Next Next post: Adeerkay ayaa ii sheegay aniga oo ah (wiil, 14 jir ah) in aan xanuunsanayo haddii aan inbaddan Siigaysto. Waxaan sameeyaa ugu yaraan halmar maalintii. Ma tahay midaasi mid aan caafimaadka u fiicnayn?